Nchekwa ezumike dịkwa ka ekweghị Chlorine - Potatoes News
Nchekwa dormancy nwekwara ike na-enweghị chlorine
Ndị na-eto eto nduku nwere ihe ndị ọzọ zuru ezu na Chlorine IPC maka nchekwa nchekwa ogologo oge, dịka nchọpụta nchekwa nke Wageningen University & Research (WUR) Open Open. Ihe nsonaazụ nke MD na-agbasa n'ọhịa, gbakwunye ya na ọgwụgwọ ohere, ọ dịkarịa ala iji tụnyere gas gasị na ndị ọrụ chlorpropham.
Nkwuputa na Chlorine IPC agaghị agbanwe ọhụrụ abịaghị dịka ihe ijuanya. Chlorpropham bụ isiokwu nke mkparịta ụka ruo oge ụfọdụ. Karịsịa, ikike nchekwa nri nri EFSA nyere ndụmọdụ na-adịghị mma maka iji ya dị ka ihe na-egbochi mkpụrụ osisi, n'ihi nnweta.
Kọmịshọn European mechara kpebie igbochi ngwaahịa nwere ihe a na-arụ ọrụ dịka nke 8 Jenụwarị 2020, yana oge eji eji dị iche na nke Mba ọ bụla. Na mberede, a na-atụ anya na a ka nwere ike iji Chlorine IPC mee ihe maka oge nchekwa ọzọ.
Maka Arysta LifeScience, nke bụ akụkụ nke onye na-emepụta ihe ọkụkụ UPL, enweghị mgbagwoju anya gbara chlorpropham gburugburu kpaliri nnwale nke ụzọ ndị ọzọ maka igbochi igbochi. WUR Open Crops na Lelystad mere nnukwu ule nchekwa maka afọ gara aga. Nke a jiri ọgwụgwọ na chlorine tụnyere, yana ihe ndị ọzọ, na-enweghị ọgwụgwọ na naanị ịgba na Royal MH, nke UPL bụ onye na-enye ikike.
Onye nyocha Joop Esselink nke WUR na-akọwa na poteto nke ụdị ule Agria, Fontane, Innovator na Nicola bụ nke ikpeazụ a tụlere na etiti ọnwa Mee maka izizi mpụga, izizi nke ime, ọnwụ nchekwa na ogo izugbe. Nduku na-echekwara na 7 degrees na n'èzí ikuku jụrụ. E nyere Chlorine IPC ugboro anọ na ọgwụ a tụrụ aro.
Loss nke mmiri
Nsonaazụ na-egosi na otu ngwa na MH na-enwetakwa otu ihe ahụ dị ka nje germination na Chlorine IPC. Ejiri ihe dị iche iche mee ihe ugboro ise site na njedebe nke February ruo etiti May.
'Na Agria, enweghi nsogbu nke izizi na tubers n'oge oge nchekwa niile nke ihe ndi emere. Varietiesdị atọ ndị ọzọ gosipụtara nje dị na mpụga na nyocha ikpeazụ, na Chlorine IPC na MH, 'ka Esselink na-ekwu. 'Ọ bụrụ na anyị eleba anya na mmiri ọghọm, MH akara na nkezi dị mma karịa Chlorine IPC.'
MH dị ike na-alụso nje ndị dị n'ime dị iche iche dịka Innovator, bụ ahụmịhe Esselink. Na Chlorine IPC, òkè nke izizi dị n'ime ụdị dị iche iche n'ọmụmụ ihe nchekwa bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 11. Achọpụtaghị izizi dị n'ime ihe na-esi na poteto MH-agwọ.
Dabere na Esselink, nyocha nchekwa nke WUR Open Crops na-akwado ikike MDs dị ka onye na-agbatị ụra. 'N'ezie yana njikọ nke oghere kwere, MH bụ ezigbo ntọala maka idebe poteto dị jụụ ogologo oge,' ka ọ na-ekwu.
'Otú ọ dị, n'ọmụmụ ihe a, anyị kwesịrị ịkọwa na oge 2017-2018 dị mma maka ọgwụgwọ MH. N'oge ahụ, a na-agbasakarị onye ọrụ ahụ na ihe ọkụkụ dị mkpa nke nduku, nke ahụ dịkwa ezigbo mkpa maka ịmịkọrọ ihe dị mma ma ya mere ọ ga-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị. ''
UPL onye oru ugbo bu Leen Struik na-ekwuputa na agbanyeghi nchoputa ihe nchoputa, o bughi ebumnuche ka okwado MDs ka o chebe ya. 'Ruo February, MH na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na poteto anọdụ ala karịa, usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ na-adịkarị mkpa, n'agbanyeghị mmetụta ogologo nke MH. Ọ ka dị mkpa iji nyocha oge niile. Ozugbo ntụpọ ndị na-acha ọcha dị na tubers, achọrọ ihe. ''
Ngwaahịa dịka 1,4Sight, Biox M ma ọ bụ Usoro Mgbochi na ethylene dị maka ọgwụgwọ ụlọ. Na mgbakwunye, UPL na-atụ anya nnabata maka ọhụụ ọhụrụ na-eme ihe na nso nso adịghị anya. Nke a metụtara ngwaahịa sitere na mmanụ sitere n'okike nke a na-agbanye n'ime ụlọ nchekwa.
Ndị ọrụ nwere ike iji rụọ ọrụ mgbe afọ na-esote maka nchịkwa na mkpụrụ ndụ nchekwa dị oke ọnụ karịa Chlorine IPC, dị ka Struik si kwuo. 'Uru nke spraying MH bụ na obere usoro onunu ogwu na obere ngwa nke ndị na-eme ihe na-eme ihe na-enye mmetụta zuru oke. Ndị na-eto eto nduku na-edebe ogologo oge nwere ike ịchekwa ihe dị ka pasent 25 ruo 30 na ego ha na-akwụ maka igbochi mgbochi. ''
Struik na-ekwu na ojiji nke MD na nduku amụbaala sharply na-adịbeghị anya. Dị ka ya si kwuo, ọtụtụ ndị na-eto eto na-ahọrọ usoro a nke na-epupụta igbochi n'ihi njikwa ezi uche nke nchekwa nduku na mmetụta dị n'akụkụ na-aga n'ihu na ihe ọkụkụ. Kpụrụ nke nnụnụ atọ nwere otu nkume na-adọrọ adọrọ na omume.Fesa ihe ọkụkụ dị mkpa nwere mmetụta kacha mmaOkwu mkparịta ụka na-aga n'ihu banyere MDs bụ oge kachasị mma iji dọọ n'ọhịa. Leen Struik na-akọwa na UPL na-atụ aro ịgbasa na ihe ọkụkụ dị oke mkpa izu atọ ma ọ bụ izu ise tupu ogbugbu ahụ. Onye okacha amara maka oru ugbo na akowa na, dika ego ozo, a na-elele tuber n'okpuru nkpuru. 'Site na pasent 80 nke tubers buru ibu karịa 25 ruo 30 milimita, ịgba agaghị efu kilogram ahụ.' Mana dị ka Struik si kwuo, na omume ndapụta mkpụrụ n'ihi MH na-adịkwa mma karịa ka a tụrụ anya na ngwa mbụ. Ọ rụtụrụ aka na ọtụtụ nkata ka agbachapụtara na mbido afọ 2018 n'ihi uto na-aga n'ihu. 'Dị ka amaara, ọ nweghị mmetụta na-adịghị mma na mmepụta ikpeazụ. Nke a bụ nkwenye nke nsonaazụ na nyocha ochie Bekee.
Tags: chlorprophampụtara nnabataMH
Ọnwụ ọnwụ na mkpakọ mmebi na ụlọ ahịa nduku
Bangladesh ka nwere nsogbu site na nsogbu nchekwa ndị na-akọ nduku
Nchegbu banyere CIPC ndị ọzọ maka nchekwa
Chekwaa poteto ogologo oge: ihere na friji
Ndi CO2 nwere mmetụta na agba agba nduku?
Nduku na eyịm, ọnụahịa ndị ahụ na-akụda mmụọ
Biko banye isonyere mkparịta ụka
Nduku na-emepụta akụrụngwa Kiremko na-etinye ego na SAP ERP-platform
Onye ọka ikpe Mexico machibidoro mbubata ịbubata na US, 'ike mba ofesi nwere amụma asị'